Thinta Typing Online Lessons
Thinta Typing Study
Ilokhi yekhiphedi yezinombolo
Uhlu kwemithombo khulula
Ulimi Afrikaans አማርኛ العربية অসমীয়া Azərbaycanca Башҡортса Беларуская Български বাংলা Bosanski Català Corsu Čeština Cymraeg Dansk Deutsch Ελληνικά English Español Eesti Euskara فارسی Suomi Føroyskt Français Frysk Gaeilge Gàidhlig Galego ગુજરાતી Harshen Hausa עברית हिन्दी Hrvatski Kreyòl Ayisyen Magyar Հայերեն Indonesia Asụsụ Igbo Íslenska Italiano 日本語 Basa Jawa ქართული Қазақша ភាសាខ្មែរ ಕನ್ನಡ 한글 Kurdî Кыргызча Lëtzebuergesch ພາສາລາວ Lietuvių Latviešu Malagasy Māori Македонски മലയാളം Mongɣol kele मराठी Bahasa Melayu Malti မြန်မာစာ नेपाली Nederlands Norsk Chinyanja ଓଡ଼ିଆ ਪੰਜਾਬੀ Polski پښتو Português Qhichwa Română Русский سنڌي සිංහල Slovenčina Slovenščina Sāmoa chiShona Af-Soomaali Shqip Српски Sesotho Basa Sunda Svenska Kiswahili தமிழ் తెలుగు Тоҷикӣ ภาษาไทย Türkmençe Filipino Türkçe Татарча Українська اردو Oʻzbekcha Tiếng Việt isiXhosa יידיש èdè Yorùbá 中文 isiZulu Keyboard layout US English UK English US Dvorak Programmer Dvorak US Colemak US Workman Español Latino हिन्दी देवनागरी इन्स्क्रिप्ट العربية Português Brasileiro ABNT বাংলা Русский ਪੰਜਾਬੀ پنجابی Deutsch Deutsch Schweiz Jawa Indonesia Melayu తెలుగు Tiếng Việt Français Français du Canada Canadien Multilingue Français de Belgique Français de Suisse Français Bépo मराठी தமிழ் اُردُو‎ Türkçe Q Türkçe F Italiana แป้นพิมพ์เกษมณี ગુજરાતી فارسی Polski پښتو ಕನ್ನಡ മലയാളം Sunda ଓଡ଼ିଆ မြန်မာဘာသာ Українська Filipino Oʻzbekcha سنڌي Română Azərbaycanca Nederlands Belgische AZERTY Af-Soomaali Malagasy नेपाली සිංහල ភាសាខ្មែរ অসমীয়া Kiswahili Magyar Ελληνική Қазақша České Català Српски Srpski Svensk ພາສາລາວ Qhichwa Türkmençe Тоҷикӣ Български Български Фонетичен Shqip Afrikaans Հայերեն Татарча Монгол Hrvatski Dansk עברית Sesotho Slovenčina Suomi Norsk ქართული Кыргыз Беларуская Bosanski Lietuvių Galego Slovenščina Latviešu Македонски Башҡортса Eesti Euskara Cymraeg Malti 47 Malti 48 Frysk Lëtzebuergesch Icelandic Gaeilge Føroyskt Māori Keyboard ▄▄ 104 ▄▄ 105 ▀█ ▄█
Ukhohlwe igama lomsebenzisi noma iphasiwedi
Ingabe lokhu ngempela konke free?
Kungani kumele ngibhalise?
Ngingakwazi kanjani ngaphandle izikhangiso?
Ngingayisiza kanjani emsebenzini wakho?
Singakanani isikhathi Kukuthatha ukuba bafunde uthinte-hlobo?
Wena ulisebenzisa kanjani amazwi Inkomba ngomzuzu (wpm)?
Yini ngidinga ukusebenzisa TypingStudy.com?
Ngesikhathi ngiqala isifundo, uhlelo lubonisa ukuthi kumele cindezela Shift + incwadi. Kungani kunjalo?
Ingabe kufanelekile abantu dyslexic?
1) Uma ubhalisa, kuzodingeka ulwazi inqubekela kanye nomlando.
2) Ungase ufunde ngaphandle izikhangiso (ngemuva umnikelo omncane)
Ngemuva umnikelo omncane we uyosusa izikhangiso ezivela akhawunti yakho. Yiba nesineke, ngoba lokhu inqubo manual.
1) Write ukuphawula ngalokho oyithandayo nabangakuthandi
2) Bhala imibono yakho, indlela yokuthuthukisa yokufunda
3) Tshela abangane bakho ngathi (ukwabelana website yethu zokuxhumana nabantu, uhlanganyele nathi https://www.facebook.com/TouchTypingStudy)
Inani isikhathi kwakusadingeka bafunde ukubeka uthinte-uthayiphe kahle incike izici yakho siqu. Kubalulekile ukuzijayeza njalo. Ukuze imiphumela emihle siphakamisa ukuthi ukuthatha 1 isifundo ngosuku.
Khumbula, azi lapho zonke zincwadi akusho ukuthi usukulungele uthayipha fast. Iminwe Your Kudingeka sihlakulele amaphethini ukunyakaza noma kangaka ngokuthi 'muscle movement inkumbulo' lapho key ngayinye ethize itholakala, ngaphandle ecabanga amakhi noma ebuka ikhibhodi. Ukunyakaza Automatic kuphela ethuthukiswe ngokusebenzisa ukuphindaphindwa kakhulu. Khumbula - practice kuphela kwenza ephelele!
Ukukala WPM, uhlelo ibala uke ebhaliwe zingaki amazwi ngomzuzu. 1 Amazwi = izinhlamvu 5, kuhlanganise isikhala netimphawu tekubhala.
Kusukela side technical udinga nje uxhumano Inthanethi. Nokho, kungase kudingeke futhi ugqozi nokuzimisela ukwenza ngcono touch yakho amakhono okubhala.
Sicela, qinisekisa ukuthi Caps Lock akuyona uma uqala ukuthayipha. Uma CAPS Lock ivuliwe, uhlelo ucela ucindezela ikhi wabuza + Shift kanyekanye.
Ukuthayipha Study iwukuba wonke umuntu ofuna ukuthuthukisa touch wakhe amakhono okubhala. Ukuthayipha Touch ikhono eyenza umuntu uthayiphe, ngaphandle ebuka ikhibhodi ukuthola keys lesifanele.
Yebo, Typing Study kufanelekile futhi abantu nge dyslexia. With touch ukuthayipha likhono laba bantu babe inzuzo elikhethiwe eziningi izindawo ngaphandle amakhono touch ukuthayipha. Njengoba abanye abantu dyslexic nenkinga isandla, kokubili ngokombono speed and readability, umsebenzi athayiphe ke kube lula.
Funda amagama amasha usebenzisa umongo